United News, Author at UMN - Page3of 6
ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်နဲ့ သီးသန့်အင်တာဗျူးအမေးအဖြများ (အပိုင်း-၂)
မေး -အောင်မြင်မှု့ ရှုံးနိမ့်မှု့တွေကို ဘယ်သူတွေနဲ့မျှဝေခံစားလဲ? ဖြေ- မိသားစုနဲ့သူငယ်ချင်းတွေပေါ့။ကျနော့်ရဲ့ ကိစ္စအဝဝ ကို ကျနော့်မိန်းမနဲ့ သမီးလေးအပေါ်မျှဝေခံစားတယ်။ အိုးထရဒ့်ဖိုဒ့်မှာဆိုရင်တော့ ကျနော့်အကို က အခုလန်ဒန်မှာ‌ရှိနေတော့ သူ့အတွက်လည်း ကွင်းထဲလာကြည့်ရတာအဆင်ပြေတယ်လေ။ဒီတော့ ကျနော့်ကလေး၊ကျနော့်မိန်းမ၊သူငယ်ချင်းတွေ၊မိသားစု ကျနော့်အမေ၊အဖေ နဲ့ ကျနော့်ညီမလေးရောပေါ့။ မေး- မင်းကိုယ်မင်း စကားတစ်လုံး၊စာစာတစ်ခုနဲ့ သတ်မှတ်ရမယ်ဆို ဘာဖြစ်မလဲ? ဖြေ- ရဲရင့်တဲ့စစ်သည်တော် လို့ ထင်တယ်၊ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ …
ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်နဲ့အတုယူအားကျခဲ့ရခြင်းများ (အင်တာဗျူးအမေးအဖြ အပိုင်း-၁)
ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ် နဲ့ အတုယူအားကျရခဲ့ခြင်းများ ယူနိုက်တဒ် ရဲ့ ကစားသမားတွေနဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ အစီစဉ်တစ်ခုအဖြစ် My Inspiration ဆိုတဲ့ အစီစဉ်မှာဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ် ကို သူ့ရဲ့ ငယ်စဉ်ဘဝကနေ ယခုထိ လေးစားအားကျခဲ့ရတာတွေကို မေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်။ မေး- ‌ဘယ်အရာကြောင့် ဘောလုံးကန်ဖို့ အားကျရခဲ့လဲ ? ဖြေ- ကျနော့်မိသားစုတစ်ခုလုံးက ဘောလုံးကန်ကြတယ်။ကျနော့်အဖေလည်းကန်တယ်၊ကျနော့်အကိုလည်းကန်တယ်။ဒီတော့ ကျနော်လည်း မိသားစုခြေရာကိုလိုက်နင်းခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။ကျနော့်ညီအကို ဝမ်းကွဲတွေကလည်း …
ပရီးမီးယားလိဂ်ကသူငယ်ချင်းတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် သတိပေးလိုက်တဲ့ ဖာနန်ဒက်စ်
ယူနိုက်တဒ် ကွင်းလယ်ကစားသမား ဘရူနို‌ဖာနန်ဒက်စ် က သူ့ကိုယ်သူ ရဲရင့်တဲ့ စစ်သည်တော် လို့ သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ပေါ်တူဂီစတား က အိုးထရဒ့်ဖိုဒ့် မှာ ရောက်ရောက်ခြင်းပဲ အသဲနှလုံးအားလုံးကို ဆွဲငင် သိမိးပိုက်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး သူ့ကြောင့်ပဲ အောင်ပွဲဆာလောင်စိတ်နဲ့ တိုက်ပွဲဝင်စိတ် ဓာတ်က အမြင့်ဆုံးကို တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘရူနို နဲ့ ပက်သက်ရင် ကစားသမားအဟောင်းတွေက‌ဖြစ်စေ လက်ရှိအသင်းဖော်တွေကဖြစ်စေ ပြောကြတဲ့တစ်ခုထဲသော စကားကတော့ …
အေဂျက်ကွင်းလယ်လူ ဗန်ဒါဘိခ်ဟာ ယူနိုက်တက်အသင်း နွေရာသီခေါ်ယူမယ့် ဦးစားပေးစာရင်းထဲတွင် ပါဝင်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ ဗန်ဒါဘိခ်ကို ပေါင် ၃၅ သန်းဖြင့် သဘောတူညီမှု ရယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ဟာ ဆန်းဒါးလန်း လူငယ် ကစားသမား Joe Hugill (၁၆ နှစ်) အား ပေါင် ၃၀၀,၀၀၀ ဖြင့်ခေါ်ယူရန် နီးစပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းအတွက်အာဆင်နယ် ၊ စပါး …
ပီလီရဲ့စံချိန်ကိုချိုးဖျက်ပြီးတောင်မှ အနားယူဦးမှာမဟုတ်တဲ့ ယူနိ်ုက်တက်အသင်းဖော်ဟောင်းအမည်ကို ဂယ်ရီနဗီးလ်ဖွင့်ဟ
May 4, 2020 May 4, 2020 - by United News - LeaveaComment
ယူနိုက်တက် ဂန္တ၀င်နောက်ခံလူတဦးဖြစ်သူ ဂယ်ရီနဗီးလ်ကတော့ ယူနိုက်တက် အသင်းဖော်ဟောင်း ရော်နယ်ဒိုအနေနဲ့ လက်ရှိအချိန်မှာ အနားယူဦးမှာ မဟုတ်သေးဘူးလို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ နဗီးလ်းက ရော်နယ်ဒိုအနေနဲ့ သမိုင်းတလျောက် ဂိုးအများဆုံး သွင်းယူထားသူ ပီလီရဲ့ ဂိုးသွင်းစံချိန်ကို ချိုးဖျက်နိုင်သည့်တိုင်အောင် အနာယူးဦးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ယုံကြည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ရော်နယ်ဒိုဟာ ကစားသမား ဘ၀တလျောက် ကလပ်အသင်းတွေနဲ့ နိုင်ငံအသင်းမှာ ပွဲပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်ကစားခဲ့သလို ဂိုးပေါင်း …
ဗိုလ်လုပွဲအနိုင်ရပြီးတာတောင် မတင်းတိမ်နိုင်တဲ့ ဆာအဲလက်စ်အကြောင်းကို ပြောပြခဲ့တဲ့ အီဗရာ
May 4, 2020 - by United News - LeaveaComment
ယူနိုက်တဒ် ဘယ်နောက်ခံလူဟောင်း ပက်ထရစ်အီဗရာ က ဆာအဲလက်စ် ရဲ့ လက်အောက်မှာ ကစားရရင် အမြင့်ဆုံး အောင်မြင်မှု့တွေရရှိပြီးတာတောင်မှ ‌မလုံလောက်သေးပဲ နောက်ထပ် ဒီဆုဖလားတွေထပ်မံရရှိဖို့ အားမွေးထားသင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ယူနိုက်တဒ် ဟာ ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကနေစလို့ လိဂ်ဖလား သုံးကြိမ်ဆက်အပါဝင် ချန်ပီယံလိဂ် တစ်ကြိမ်နဲ့ လိဂ်ဖလား ၅ကြိမ်အထိကို ၇နှစ်အတွင်းရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အီဗရာက” ကျနော်တို့မော်စကိုဖိုင်နယ်ပွဲပြီးတော့ အဝတ်လဲခန်းထဲရောက်စပဲရှိသေးတယ် ။ …
သူ့အပေါ် လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး အိုင်ဒိုးကစားသမား(၃)ဦးအကြောင်း ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ ဘရူနို
May 4, 2020 May 16, 2020 - by United News - LeaveaComment
ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်ကစားသမား ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကတော့ သူလေးစားအားကျရပြီး သူ့အပေါ် လှုံ့ဆော်မှုပေးနိုင်တဲ့ ကစားသမား က ဘာစီလိုနာကွင်းလယ်လူ အင်နီယေစတာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ အင်နီယေစတာဟာ ကစားသမားဘ၀အကောင်းဆုံးအချိန်တွေတုန်းက ဇာဗီနဲ့အတူ ကမ္ဘ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကွင်းလယ်အတွဲအဖက်အဖြစ် ဘာစီလိုနာရဲ့ ရွှေခေတ်ကို ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဖာနန်ဒက်စ်က ” ကျနော့်အတွက် ကြည့်လို့အကောင်းဆုံးကစားသမားတဦးက အင်နီယေစတာပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုရင်သူက နံပါတ် (၈)နေရာနဲ့ (၁၀) နေရာကို ပေါင်းစပ်ပြီး ကစားနိုင်တယ်လေ။ …
ပေါလ်ပေါဂ့်ဘာရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ နောက်ဆုံးရ အခြေအနေ
မန်ယူနိုက်တဒ် အသင်းအနေနဲ့ လက်ရှိကပ်ရောဂါကာလအလွန်မှာ ပေါင်သန်းရာကျော်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အသင်းကို မတွေ့ရှိတာကြောင့် သူတို့ ကစားသမား ပေါဂ့်ဘာ ကို ဆက်ထိန်းထားနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်နေပါတယ်။ ယူနိုက်တဒ် နည်းပြဆိုးလ်ရှား က ပေါဂ့်ဘာ ကို အဓိက ကစားသမားအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး အသင်းအတွက် မရှိမဖြစ် အရေးပါတဲ့ ကစားသမားဖြစ်ကြောင်းကို အသိပေးထားပါတယ်။ ယူနိုက်တဒ် ဘုတ်အဖွဲ့ကလည်း သူတို့ရဲ့ ပုံရိပ်မြင့်ကစားသမားကို အလွယ်တကူ …
ဂယ်ရီနဗီးထက်သာလွန်နိုင်မယ့် ခါးသီးပြိုင်ဘက် အသင်းသားရဲ့အမည်ကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ရာဖေးလ်
ယူနိုက်တက်ကြယ်ပွင့်ဟောင်းဖြစ်သူ ဘရာဇီးကစားသမား ရာဖေးကတော့ လီဗာပူးလ် ညာနောက်ခံလူ အားနိုးလ်ဟာ ဂယ်ရီနဗီးရဲ့ လယ်ဗယ်မျိုးကို မရောက်သေးပေမယ့်လည်း ခြေစွမ်းကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါက နဗီးလ်ထက် သာလွန်နိုင်တယ်လို့ ဟောကိန်းထုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ (၁၉)နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့ အင်္ဂလန်နောက်ခံလူဟာ ဂျာဂင်ကလော့ရဲ့လက်အောက်မှာ အထူးတောက်ပခဲ့ပြီး လီဗာပူးလို ထိပ်တန်းအသင်းမှာ မရှိမဖြစ် ကစားသမားတဦးဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် လီဗာပူးလ်ကို ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားရအောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့ပြီး တိုက်စစ်ကို လိုက်ပါနိုင်သလို ဂိုးဖန်တီးမှု …
အိမ်တွင်းအောင်းကာလအတွင်း သူရဲ့ဒဏ်ရာအခြေအနေကို ရှင်းပြခဲ့တဲ့ ရပ်ဖို့ဒ်
ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ အဓိက တိုက်စစ်မှုး ဖြစ်သူ ရပ်ဖို့ဒ်ကတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းယက်ကြောင့် အိမ်တွင်းအောင်းနေစဉ်ကာလအတွင်း သူ့ရဲ့ နောက်ကျောဒဏ်ရာ အပြည့်အ၀ သက်သာရေးအတွက် တဆင့်တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဖွင့်ဟပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ ရပ်ဖို့ဒ်ဟာ ဇန်နဝါရီလ FA ဖလားပြိုင်ပွဲ ဝုဗ်အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်တွင် ကျောဒဏ်ရာ ရခဲ့တာကြောင့် အနားယူခဲ့ရပြီး အခုအချိန်အထိ ပြန်လည် မကစားနိုင်သေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါ အချိန်တွေက သူ့အတွက် ခက်ခဲခဲ့တယ်လို့ ၀န်ခံခဲ့ပြီး …